कृषिप्रधान देशमा ७ अर्बको तरकारी आयात, ११ करोडको निर्यात ! – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
कृषिप्रधान देशमा ७ अर्बको तरकारी आयात, ११ करोडको निर्यात !
काठमाडौँ, २५ माघ, कृषि प्रधान मुलुक भनिएको नेपालमा ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य वस्तुको आयात हुँदै आएको छ । नेपालमा कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन नै नहुने र उत्पादित वस्तु पनि बजारको अभावमा बारी मै कुहिने अवस्था छ तर अर्बौँको कृषि उत्पादन भारतबाट ल्याएर खान हामी बाध्य छौँ । कृषियोग्य जमिनहरु बाँझै छन्, उत्पादन गर्ने श्रमिक अधिकांश त विदेश पलायन भएका छन् र केही बाँकी रहेका पनि शहर केन्द्रित भएका छन् जसले गर्दा कृषिमा नेपालको परनिर्भरता बढेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा तरकारी मात्रै करिब ७ अर्बको विदेशबाट आयात भएको तथ्याङ्क छ । सोही अवधिमा नेपालको तरकारीजन्य वस्तुको निर्यात ११ करोड मात्रै छ । यसले नेपालको व्यापार घाटा बढाउँदै समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ तर यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको छैन ।
पाँच महिनाको अवधिमा तीन अर्बको आलु, दुई अर्बको प्याज, २४ करोडको गोलभेँडा र सवा करोडको बन्दा–काउली आयात भएको छ । तर बजारमा ४० रुपैयाँ किलो पर्ने बन्दा बिचौलियाले दुई रुपैयाँमा पनि नकिनेपछि किसान आफैँ तरकारीबारीमै डोजर लगाउँन बाध्य छन् ।
यसैगरी चीनबाट वर्षमा साढे चार अर्बको र भारतबाट ९३ करोडको स्याउ आयात हुन्छ । अमेरिकाबाट पनि अढाई करोडको स्याउ आएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । तर नेपालकै जुम्ला र हुल्लाका स्याउले बजार पाउन सकेका छैनन् । नेपाली स्याउ त झन् एक रुपैयाँको पनि निर्यात भएको छैन ।
यता विदेशबाट एक अर्ब ८२ करोडको दूध आयात हुँदै आएको छ । भारत, बेल्जियम, बेलारुस, बेलायत, अष्ट्रेलियाबाट पनि नेपाली बजारमा दूध आउँछ । तर नेपाली किसानले बजार नपाएर सडकमा पोख्न बाध्य छन् । नेपालको दूध निर्यात हुनै सकेको छैन आजको नयाँ पत्रिकाले मुख्यपृष्ठमा समाचार लेखेको छ ।
सरकारले कृषि पेशाप्रति युवालाई जागरुक गराउन नसक्नु, वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिनु, उपयुक्त कृषि नीति तयार गर्न नसक्नु, नेपाली उत्पादनको निर्यातमा चासो नदिनु, उत्पादनमूखी कृषिकलापमात्रै गर्नु, बजार व्यवस्थापनको पाटोमा मौन रहनु आदि कारणले नेपालमा कृषि पेशाप्रति रुची घट्दै गएको, उत्पादन घट्दै गएको र परनिर्भरता बढ्दै गएको हो ।
प्रकाशित मिति: 2019-02-08 2019-02-08 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged आयात-निर्यात तरकारी परनिर्भरता
जनता आवास कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा : अर्थमन्त्री डा. खतिवडा
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाद्वारा सीएमसीसँगको सम्झौता रद्द, काठमाडौँमा पानी आउने सपना धकेलियो
Tags: आयात-निर्यात, तरकारी, परनिर्भरता